ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မက်ဆီရဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းဆိုးများ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာ (၆၇၅)မိနစ်အထိ ကြာမြင့်လာတဲ့ မက်ဆီ
23 Jun 2018 . 10:40 AM
ရုရှားမြေမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိလို့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ဟာ နောက်ထပ် မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် မက်ဆီ Messi အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာ (၆၇၅)မိနစ်အထိ ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ကစားပြီးခဲ့တဲ့ (၂)ပွဲအပါအဝင် မှတ်တမ်းတွေအရ (၆၇၅)မိနစ်အထိ ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားအသင်းကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီးမှာ မက်ဆီ Messi အပေါ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အဓိက ပြိုင်ဘက် ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo လောက် နိုင်ငံအသင်းအပေါ် ပေးဆပ်လိုစိတ်မရှိတဲ့ ကစားသမားလို့ နှိုင်းယှဉ်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပါ ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့ ပထမပိုင်း ပွဲချိန်ကစားချိန်အတွင်းမှာဆိုရင် မထင်မရှား ကစားသမားတစ်ဦးလောက်သာ ကစားပြနိုင်ခဲ့ပြီး (၄၅)မိနစ်အတွင်း ဘောလုံးထိချက်ပေါင်းက အကြိမ် (၂၀)သာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ မက်ဆီ Messi ထက် ဘောလုံးထိချက်နည်းတဲ့ ကစားသမားဆိုလို့ အဂွဲရိုး Aguero တစ်ဦးသာ ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဘောလုံးထိချက်က ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာ (၉)ကြိမ်သာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားနဲ့ ပွဲမှာ အမှားတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်း ဂိုးသမား ကာဘယ်လာရို Caballero တောင် ဘောလုံးထိချက် (၂၂)ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး မက်ဆီ Messi ထက် မှတ်တမ်းတွေအရ အနည်းငယ် အသာရခဲ့ပါတယ်။
ခရိုအေးရှားနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ မက်ဆီ Messi ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ဂိုးပေါက်တည့်ကန်ချက်ဖြစ်သလို တစ်ပွဲလုံးမှာ တစ်ကြိမ်ပဲရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ဂိုးပေါက်ခြိမ်းခြောက်မှုကို (၆၄)မိနစ်မှာ ကန်ခဲ့တဲ့ ကန်ချက် တစ်ကြိမ်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ မက်ဆီ Messi ရဲ့ ဘောလုံးထိချက်ပေါင်းက (၄၇)ကြိမ်သာရှိခဲ့ပြီး ဘောလုံးပေးပို့မှုပေါင်း (၂၃)ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အာဂျင်တီးနားအသင်းဖော်တွေရဲ့ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတာကလည်း မက်ဆီ Messi ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ပွဲထွက်ပါဝင်လာတဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ ဘယ်ကစားသမားကမှ မက်ဆီ Messi ထံ (၂)ကြိမ်ထက်ပိုတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကို စစ်တမ်းတွေက ဖော်ပြနေခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီ Messi အပြင် အာဂျင်တီးနားအသင်းကလည်း မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကို အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံး (၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်(ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ နယ်သာလန်အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ပယ်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်)။ ခရိုအေးရှားကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ နိုက်ဂျီးရီးယားအသင်းနဲ့ ကစားမယ့် အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ အာဂျင်တီးနားအသင်း နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ဖို့ ရုန်းကန်ရတော့မှာဖြစ်ပြီး မဖြစ်မနေ နိုင်ပွဲရယူရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အုပ်စုအဆင့်ကလှည့်ပြန်ရမယ့် အခြေအနေဆိုးတစ်ရပ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းကို ဝေဖန်မှုတွေကြားကနေ မက်ဆီ Messi ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ဆွဲတင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်သွားရတော့မှာပါ . . .
Photo:Toronto Sun, Evening Standard, Twitter
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဂိုးပေါကျပြောကျဆုံးခဲ့တာ (၆၇၅)မိနဈအထိ ကွာမွငျ့လာတဲ့ မကျဆီ
ရုရှားမွမှော ကငျြးပနတေဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ခွစှေမျးပွသနိုငျခွငျးမရှိလို့ ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးရဲ့ နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi ဟာ နောကျထပျ မှတျတမျးဆိုးတဈခုထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈပမေယျ့ မကျဆီ Messi အနနေဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဂိုးပေါကျပြောကျဆုံးခဲ့တာ (၆၇၅)မိနဈအထိ ကွာမွငျ့လာခဲ့ပွီဆိုတဲ့ မှတျတမျးဆိုးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုလကျရှိ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ကစားပွီးခဲ့တဲ့ (၂)ပှဲအပါအဝငျ မှတျတမျးတှအေရ (၆၇၅)မိနဈအထိ ရှိလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခရိုအေးရှားအသငျးကို ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ပှဲအပွီးမှာ မကျဆီ Messi အပျေါ ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျသံတှေ ပိုမိုထှကျပျေါလာခဲ့ပွီး အဓိက ပွိုငျဘကျ ပျေါတူဂီတိုကျစဈမှူး စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo လောကျ နိုငျငံအသငျးအပျေါ ပေးဆပျလိုစိတျမရှိတဲ့ ကစားသမားလို့ နှိုငျးယှဉျဝဖေနျမှုတှနေဲ့ပါ ရငျဆိုငျနရေတာဖွဈပါတယျ။
ခရိုအေးရှားအသငျးနဲ့ ပထမပိုငျး ပှဲခြိနျကစားခြိနျအတှငျးမှာဆိုရငျ မထငျမရှား ကစားသမားတဈဦးလောကျသာ ကစားပွနိုငျခဲ့ပွီး (၄၅)မိနဈအတှငျး ဘောလုံးထိခကျြပေါငျးက အကွိမျ (၂၀)သာ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ခရိုအေးရှားနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ မကျဆီ Messi ထကျ ဘောလုံးထိခကျြနညျးတဲ့ ကစားသမားဆိုလို့ အဂှဲရိုး Aguero တဈဦးသာ ရှိခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ ဘောလုံးထိခကျြက ပထမပိုငျးတဈပိုငျးလုံးမှာ (၉)ကွိမျသာ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ခရိုအေးရှားနဲ့ ပှဲမှာ အမှားတှေ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျး ဂိုးသမား ကာဘယျလာရို Caballero တောငျ ဘောလုံးထိခကျြ (၂၂)ကွိမျရှိခဲ့ပွီး မကျဆီ Messi ထကျ မှတျတမျးတှအေရ အနညျးငယျ အသာရခဲ့ပါတယျ။
ခရိုအေးရှားနဲ့ ပှဲစဉျမှာ မကျဆီ Messi ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေ စိတျပကျြဖို့ကောငျးခဲ့ပွီး ပထမဆုံး ဂိုးပေါကျတညျ့ကနျခကျြဖွဈသလို တဈပှဲလုံးမှာ တဈကွိမျပဲရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ဂိုးပေါကျခွိမျးခွောကျမှုကို (၆၄)မိနဈမှာ ကနျခဲ့တဲ့ ကနျခကျြ တဈကွိမျသာရှိခဲ့ပါတယျ။ ပှဲပွီးဆုံးခြိနျမှာ မကျဆီ Messi ရဲ့ ဘောလုံးထိခကျြပေါငျးက (၄၇)ကွိမျသာရှိခဲ့ပွီး ဘောလုံးပေးပို့မှုပေါငျး (၂၃)ကွိမျသာ ပွုလုပျနိုငျခဲ့တယျ။ အာဂငျြတီးနားအသငျးဖျောတှရေဲ့ အထောကျအပံ့ပေးနိုငျစှမျးမရှိတာကလညျး မကျဆီ Messi ခွစှေမျးမပွနိုငျတဲ့ အကွောငျးအရငျးတဈခုလိုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာ ပှဲထှကျပါဝငျလာတဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးရဲ့ ဘယျကစားသမားကမှ မကျဆီ Messi ထံ (၂)ကွိမျထကျပိုတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု မပွုလုပျနိုငျခဲ့တာကို စဈတမျးတှကေ ဖျောပွနခေဲ့ပါတယျ။
မကျဆီ Messi အပွငျ အာဂငျြတီးနားအသငျးကလညျး မှတျတမျးဆိုးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလား ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ ဘယျလျဂြီယံအသငျးကို အနိုငျရပွီးတဲ့နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ နောကျဆုံး (၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ(ဘယျလျဂြီယံအသငျးကို ကြျောဖွတျပွီး ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ နယျသာလနျအသငျးကို အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ ပယျနယျတီ အဆုံးအဖွတျနဲ့ အနိုငျရခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ)။ ခရိုအေးရှားကို ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ နိုကျဂြီးရီးယားအသငျးနဲ့ ကစားမယျ့ အုပျစုနောကျဆုံးပှဲစဉျမှာ အာဂငျြတီးနားအသငျး နောကျတဈဆငျ့တကျရောကျဖို့ ရုနျးကနျရတော့မှာဖွဈပွီး မဖွဈမနေ နိုငျပှဲရယူရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျ အုပျစုအဆငျ့ကလှညျ့ပွနျရမယျ့ အခွအေနဆေိုးတဈရပျနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အာဂငျြတီးနားအသငျးကို ဝဖေနျမှုတှကွေားကနေ မကျဆီ Messi ဘယျလောကျအတိုငျးအတာအထိ ဆှဲတငျပေးနိုငျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့သှားရတော့မှာပါ . . .